Ebe i nwere ike ịhụ ihe niile anyị na mkpụrụ ego akpịrịkpa reviews. Mkpụrụ ego akpịrịkpa na-e na ziri ezi na kpọmkwem nkeji n'uche. All ihe ọtụtụ ndị a na-iji tụọ na (opekempe) gram, Ounce na Troy ounce. Nke ziri ezi na nke mkpụrụ ego akpịrịkpa ga-abụ nnọọ elu. Whether you’re a collector or a stacker, ihe ọtụtụ ndị a bụ ndị ị chọrọ.